सर्वश्रेष्ठ अण्डा सलाद रेसिपी - व्यंजनहरु
ग्राहम क्र्याकर क्रस्टको साथ फल ककटेल पाई
भुनी कुखुराको साथ के सेवा गर्ने
खोर्सानीमा के प्रयोग गर्ने
सर्वश्रेष्ठ अण्डा सलाद रेसिपी
को सर्वश्रेष्ठ अण्डा सलाद रेसिपी एक सजिलो मनपर्ने छ! यस भन्दा बढि पिकनिक उत्तम केहि पनि छैन कडा उमालेको अण्डा मेयो र चुटकीमा रायोको साथ मिश्रित र कोर्सरी र हरियो प्याजको साथ पाठ्यक्रम क्रन्ची!
चाहे तपाइँ अण्डा सलाद स्यान्डविच वा लेटस वा कम कार्ब र्‍याप प्रयोग गरी स्वस्थ अण्डा सलाद बनाउनुहोस्, केहि पनि 'सबै अमेरिकी' जस्तो छैन र अण्डा सलाद!
तपाईं कसरी भुटेको आलु बनाउनुहुन्छ
अंडा सलादको लागि अण्डाहरू कति लामो उमाल्ने
म यो विधि प्रयोग गर्छु उत्तम कडा उमालेको अण्डा हरेक पटक। तिनीहरू टेन्डर पकाएको सेतो र मलाई खैरो र yellowको मिडलहरू (खरानी रिंग बिना) बाहिर आउँछन्।
म तिनीहरूलाई उमालेकोमा ल्याउँछु र त्यसपछि तातोबाट हटाउँछु र १ 15-१-17 मिनेट (ठूला अण्डा) को लागी बस्न दिन्छु। चिसो पानी अन्तर्गत चलाउनुहोस् र यो पक्का छ भन्ने निश्चित गर्न एकको छीलो।
अंडा सलाद कसरी बनाउने
के तपाईको अण्डाहरू ताजा छन्? सबै भन्दा राम्रो अण्डा सलाद नुस्खा महान सामग्रीहरु को साथ शुरू हुन्छ। ताजा अण्डा राम्रो पकाउन र उज्यालो देखिन्छ। एउटा ताजा अण्डा यसको छेउमा एक कचौरा पानीको फेलामा राख्नेछ, यदि तिनीहरू थोरै पाको भए, तिनीहरू अझै डुब्नेछन्, तर एउटा छेउमा बस्नेछन्। यदि तिनीहरू पानीको सतहमा तैरिएमा अण्डा नखानुहोस्, यसको मतलब उनीहरूको समयावधि सकियो।
प्याज र अजवाइनलाई राम्ररी पासा गर्न पक्का हुनुहोस् ताकि अण्डाहरू भन्दा टुक्रा साना हुन्छन्।
पोर्क चप्स आलु र सकरक्रुट विधि
अंडा सलाद स्यान्डविच बनाउन
पूर्ण मेसिन नभएसम्म मेयोनेजको साथ पिटेर मैश गर्नुहोस् र त्यसपछि सेतोमा फोल्ड गर्नुहोस्। यसले उत्तम अण्डा सलादको लागि बनाउँदछ, यो यत्तिको क्रीमयुक्त बाहिर आउँदछ!
म एउटा प्रयोग गर्दछु अण्डा स्लीसर सेतोलाई स्लिसरमा राख्ने सेतो काट्न, काट्नुहोस् र त्यसपछि अण्डा पल्टाउनुहोस् र फेरि यसलाई राख्नुहोस्। काट्नेलाई द्रुत बनाउनुहोस्! म अन्य चीजहरूको लागि पनि मेरो अण्डा स्लीसर प्रयोग गर्दछु स्ट्रोकरी, किवी र यो विशेष गरी मशरूमहरू काट्नका लागि उत्कृष्ट छ कुखुरा मार्सला ।
उमालेर, चिसो र अंडे छील। आधा काट्नुहोस्, यलोक्स र काट्ने सेतोहरू हटाउनुहोस्।
मेयोनेज, रायोको र नुन र स्वादको लागि मिर्चको साथ अण्डाको मासुलाई म्यास गर्नुहोस्।
काटिएको अन्डा गोरा र हरियो प्याज, अजवाइन, काटिएको ताजा डिल थप्नुहोस्। ध्यानपूर्वक ब्लेन्ड गर्नुहोस् र रोटी, सलाद, वा र्‍यापमा चिसो सेवा गर्नुहोस्!
ताजा लिनको लागि, एक एभोकैडो अण्डा सलाद म्यास गरिएको भोकडोको साथ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्! एक अमेरिकी क्लासिक मा सुपर स्वस्थ ले!
अण्डा सलाद कति लामो हुन्छ?
तपाईको मतलब केहि बाँकी छ भने? यो बताउन धेरै सजीलो छ जब अण्डको सलाद फ्याँक्न तयार छ। यसले पानी पाउनेछ र यसको उज्यालो रंग हराउनेछ! तर अवसरहरू छन्, यो अण्डा सलाद नुस्खा तपाईंको घरमा धेरै लामो समय सम्म रहँदैन!
अधिक सजिलो सलाद
झींगा सलाद - croissants मा महान
सर्वश्रेष्ठ आलु सलाद रेसिपी (सजिलो) - धेरै स्वादिष्ट
सर्वश्रेष्ठ चिकन सलाद - सबै भन्दा राम्रो स्यान्डविच!
हाम सलाद - छोडेको लागि महान!
वाल्डोर्फ सलाद - ताजा र crunchy!
क्लासिक टूना सलाद - सजिलो विधि सलाद वा रोटी मा महान!
तयारी समय१० मिनेट कुक समय१० मिनेट कुल समयबीस मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन क्रीमी अण्डा सलाद नुस्खा भन्दा पिकनिक उत्तम केहि अरू छैन! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। अण्डा कडा उमालेको र शीतल
▢१ ½ चम्मच पहेंलो रायो
▢१ हरियो प्याज पातलो काटियो
▢१ रिब अजवाइन राम्ररी पासा
▢दुई चम्मच ताजा डिल काटिएको
बदाम बटर फज मीठो कन्डेन्स् दुधको साथ बनाईयो
आधामा अण्डा काट्नुहोस्। योकहरू र गोरा काट्नुहोस्।
मेयोनेज, सरसों र नुन र कालो मिर्चको साथ मस योकहरू चिल्लो र क्रिम नभएसम्म स्वादको लागि।
बाँकी सामग्री थप्नुहोस् र राम्रोसँग हलचल गर्नुहोस्।
रोटी वा सलादमा परोस।
क्यालोरिज:20२०,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:एघारg,मोटो:२g,पागलिएको बोसो:6g,कोलेस्ट्रॉल:9 33मिलीग्राम,सोडियम:2 33२मिलीग्राम,पोटासियम:१77मिलीग्राम,चिनी:१g,भिटामिन ए:7070०IU,भिटामिन सी:०.9मिलीग्राम,क्यालसियम:53मिलीग्राम,फलाम:१.6मिलीग्राम
कीवर्डअण्डा सलाद कोर्सदिउँसोको खाना, सलाद पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यस सजिलो विधिलाई पुन: ठीक गर्नुहोस्